Otu esi etinye & hazie Git na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye & hazie Git na Rocky Linux 8
October 30, 2021 October 4, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Git site na Appstream
Usoro 2. Chịkọta & Wụnye Git site na Isi Iyi
Otu esi ahazi Git
Git bụ oru ngo mepere emepe nke a na-arụsi ọrụ ike na-arụsi ọrụ ike na 2005 site n'aka Linus Torvalds, onye okike sistemụ arụmọrụ Linux ama ama. Emebere Git maka ndị nrụpụta chọrọ sistemụ njikwa ụdị kwụ ọtọ mara mma. Ọtụtụ sọftụwia bụ mbọ imekọ ihe ọnụ na mgbe ụfọdụ nwere ike ịnwe ọtụtụ narị mmadụ na-arụ ọrụ na mmepe ngwanrọ. Ọ dị mkpa ịgbaso mmemme ndị a na-emekarị na ngalaba n'ọtụtụ ọrụ tupu ejikọta ya na nna ukwu maka ntọhapụ. Ọ dị mfe iji nyochaa na nyochaa mmejọ ọ bụla na-ezighi ezi ma laghachi azụ, na-eduga na mmepe dị mfe karị ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-ezighị ezi.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye Git na Rocky Linux 8 n'ụzọ dị iche iche.
Site na ndabara, Git dị na ebe nchekwa iyi App wee tinye ya site na iji njikwa ngwugwu DNF. Iji mee nke a, jiri iwu a:
Ọmụmaatụ nke ndabere nke a ga-etinye:
Ozugbo arụnyere, nyochaa nwụnye:
Ekele, ị tinyela Git na Rocky Linux 8 site na iji usoro njikwa dnf.
Nkuzi ekpuchila nwụnye site na iyi App. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ ụdị Git kacha ọhụrụ, a na-atụ aro ka ịwụnye ya mgbe niile site na isi mmalite. Agbanyeghị, ọ na-ewe ntakịrị oge mana ọ ga-ahapụ gị ka ụdị kachasị ọhụrụ dị.
Dị ka ọ na-esighi ike, ị ga-achọ ijide n'aka na a na-enyocha nsogbu nchekwa ọ bụla; Site na isi mmalite, ị nwere ike iweghachi ngwa ngwa ọ bụla mmelite ngwa ngwa na-eme ka nke a bụrụ nhọrọ kacha mma maka onye ọ bụla chọrọ iji Git ọhụrụ.
Tupu ịmalite nrụnye site na isi mmalite, jiri su iwu ịbanye n'ime mgbọrọgwụ akaụntụ maka echichi a.
Iji malite, wụnye ya Ndabere Git dị ka ndị a:
Ọzọ, gaa na akwukwọ ntọhapụ ịchọta ebe nchekwa zip zip ma ọ bụ ntọhapụ kacha ọhụrụ sitere na Git.
N'oge edere ntuziaka, 3.3.0 bụ ntọhapụ kwụsiri ike kachasị ọhụrụ. Jiri ihe wget iwu dị ka n'okpuru:
jiri wget iwu iji nweta ụdị mmepe kachasị ọhụrụ (nna ukwu):
Mara, ejikwala ụdị a ma ọ bụrụ na ọ ga-adị mma yana enwere ike ịnwe ahụhụ.
Na-esote, Mepee akwụkwọ ndekọ aha ị budatara:
sudo unzip v2.33.0.zip
Ugbu a ị ga-achọ ịnyagharịa na ndekọ site na iji iwu CD:
Ugbu a ịkwesịrị ịme ihe ndị a mee iwu iji wụnye git:
Iwu nke mbụ:
Iwu nke abụọ:
Ugbu a ị tinyela Git site na isi mmalite, nyochaa nrụnye wee wuo:
Ekele, ị tinyela Git na Rocky Linux 8 site na iji usoro nchịkọta.
Mgbe echichi gasịrị, ị ga-achọ ịtọ ntọala ọkọlọtọ dịka aha na ozi-e, ọkachasị gburugburu git ime ozi. Nke a mara mma n'ihu dị ka nkuzi ga-akọwa n'okpuru.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịnye aha gị nke a ga-edozi Gburugburu ụwa:
Ọzọ, họrọ e-mail gị; Nke a nwere ike adịgboroja ma ọ bụrụ na-amasị gị:
Iji gosi na agbakwunyela ndị a, jiri ya config-list iwu:
Ewezugaghị, Git na-echekwa nkọwa na ~ / .gitconfig faịlụ. Ị nwere ike nyochaa ihe echekwara ugbu a site na iji the cat iwu:
Mara, iji sudo iwu nwere iwu git config ga-edobe aha njirimara na ozi-e abụọ dị iche.
Ị nwere ike ịchekwa ozi a maka ịnweta ngwa ngwa n'ọdịnihu; rịba ama na nke a bụ maka sava raara onwe ya nye nke mmadụ 1 ma ọ bụ 2 nwere ntụkwasị obi na-agba ọsọ dịka echekwaghị ozi ahụ na nchekwa ma ọ bụ ezoro ezo ma dị n'ụdị ederede, yabụ ndị ọrụ ọ bụla nwere ohere ịbanye na sava ahụ nwere ike ịgụ nke a ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị ga-ejirịrị onye inyeaka nzere, a na-adụ ọdụ ka ị chekwaa naanị obere oge maka nchekwa dị elu. Dịka ọmụmaatụ, ị ga na-arụ ọrụ taa site na iji git maka awa 1 ruo 4 mana ị gaghị emetụ ya aka ma eleghị anya izu ole na ole, wee tọọ expiry maka awa 5:
Mgbe awa 5 gachara, a ga-ehichapụ nzere. Nke a na-echekwa GIT gị.
Git bụ ngwa ngwa dị egwu maka ndị nrụpụta ngwanrọ na sysadmins. Ndị nwe sava webụ nwere ike soro mgbanwe dị na akwụkwọ ndekọ aha mgbe ị na-emepụta sava ma ọ bụ webụsaịtị gị, na ikike ịtụgharịghachi ngwa ngwa ekwesịghị ileba anya. Git abụghị sọftụwia enwere ike ịrụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ihe e mere ya.
Categories Nkume linux Tags GIT, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye Foxit PDF Reader na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye Linux Kernel 5.14 na Ubuntu 20.04